Isa 35 | Shona | STEP | Renje nenyika yakaoma zvichafara; sango richafara kwazvo, richatumbuka seruva.
Mufaro uchava paZiyoni
1 Renje nenyika yakaoma zvichafara; sango richafara kwazvo, richatumbuka seruva. 2 Richatumbuka zvizhinji, nokufara kwazvo nomufaro nokuimba; richapiwa kunaka kukuru kweRebhanoni, noukomba hweKarimeri neSharoni; vachaona kunaka kukuru kwaJehovha, ihwo ukomba hwaMwari wedu.
3 Simbisai maoko asine simba, mutsigire mabvi anodedera. 4 Iti kuna vane moyo inotya, "Simbai, musatya! Tarirai, Mwari wenyu achauya nokutsiva, nokuripira kwaMwari; achauya achikuponesai." 5 Ipapo meso amapofu achasvinudzwa, nenzeve dzematsi dzichadziurwa. 6 Ipapo anokamhina achakwakuka senondo, rurimi rwembeveve rwuchaimba nokuti mvura zhinji ichadzutuka murenje, nehova dzemvura musango. 7 Jecha, rinopisa, richashanduka dziva, nevhu, rine nyota, zvitubu zvemvura; paugaro hwamakava, paaivata, pachava nouswa, netsanga nenhokwe. 8 Ipapo pachava nomugwagwa, nenzira, ichanzi, "Nzira youtsvene;" ine tsvina haangafambi nayo, asi ichava yavo; vanofamba nayo, kunyange ari mapenzi, havangarashiki.
9 Hapangavi neshumba, kunyange nechikara hachingafambipo; hazvingawanikwipo, asi vakadzikunurwa ndivo vachafambapo; 10 vakasunungurwa vaJehovha vachadzoka, vachasvika Ziyoni vachiimba, mufaro usingaperi uchava pamisoro yavo; vachawana mufaro nomoyo muchena, kuchema nokusuwa kuchatiza.